Algeria oo gacanta ku dhigtay 700 kg oo mukhaadaraad ah. - Jubbaland TV
By Sabriye Soomaali May 31, 2018 459 No comment
Mas’uuliyiinta dlka Algerian ayaa gacanta ku dhigay in ka badan 700 kg oo ah maandooriyaha loo yaqaanno cocaine ,isla markaana ku jiray container saaran markab yar oo marayey biyaha badda ee dalkaasi.
Mukhaadaraadkaasi ayaa lagu qiyaasay in uu u dhigmo 1,543 bilyan,iyadoo dad gaaraya 20-ruux oo la socday markabkaasi yar lala qabtay,lana dhigay xabsiga.
Markabkaasi yar oo ahaa nuuca qabojiyaha leh waxa uu siday hilib ka iyo waxyaabo kale oo ka yimid dalka Brazil,wuxuuuna horay u soo maray magaalada Valencia,ee dalka Spain.
Markabkaasi yar oo ka diiwaangashanaa dalka Liberian ,waxaa gacanta ku soo dhigay ciidamada ilaalada dala Algeria oo ku soo xiray dekedda Oran oo dhacda galbeedka dalkaasi.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo kormeeray xafiisyo ay yeelanayaan Guddiyada Baarlamaanka Soomaaliya+Sawirro
By Sabriye Soomaali April 30, 2018